Fiidiyowga: Mike Blumenthal arrimaha kheyraadka khariidadaha Google | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Fiidiyowga: Mike Blumenthal arrimaha kheyraadka khariidadaha Google
Fiidiyowga: Mike Blumenthal arrimaha kheyraadka khariidadaha Google
Waxaan dhawaan la kulmay Mike Blumenthal, khabiir SEO ah oo muddo dheer deegaanka ah iyo aasaasaha madal maaraynta khibradda macaamiisha GatherUp. Waxaan ka wada hadalnay Khariidadaha Google-ka iyo SEO-ga maxalliga ah.
Qaybtan koowaad ee waraysigayaga, hoos lagu daray, waxaan uga hadalnay taariikhda Mike ee warshadaha SEO iyo wixii uu sameeyay kahor taas. Laakiin waxaa aad u xiiso badan, waxaan ka hadalnay arrimaha Khariidadaha Google-ka. Sida Khariidadaha Google-ku u muuqdaan inay lacag badan galiyaan isbeddellada is-dhexgalka isticmaalaha, farsamooyinka lacag-ururinta laakiin ka yar iyo kheyraadka tayada natiijooyinka. Spam-ka ku jira Khariidadaha Google-ka ayaa wali dhibaato weyn ku ah Google-ka mid ka mid ah Google-kuna uma eka inuu sii jiro, sida uu sheegay Mike.
Laakiin Khariidadaha Google-ka ayaa muhiimad weyn u leh Google, sida Mike uu sheegay, waxa uu rumaysan yahay in Khariidadaha Google-ku ay noqon doonaan mishiinkii saddexaad ee ugu weyn ee raadinta Google Search iyo YouTube.
Waa tan qayb ka mid ah muuqaalka:
Haddii aad tahay xirfadle raadin oo xiisaynaya ka soo dhex-muuqashada vlog-ka Barry, waxaad buuxin kartaa foomkan Wareegga Raadinta; Waxa uu hadda raadinayaa inuu ku sameeyo bulsho ahaan fog, waraysiyo ka baxsan NY/NJ aagga tri-state. Waxa kale oo aad ku biiri kartaa kanaalkiisa YouTube adigoo gujinaya halkan.
Ku guulaystayaasha Maalinta Koowaad 2020? Goobaha aan Amazon ahayn
vCita Fudud Maareynta Ganacsiga & Boos u sii qabsiga WordPress